Thwebula GnuCash 3.9 – Vessoft
Isigaba: Isofthiwe yebhizinisi
Ikhasi elisemthethweni: GnuCash
I-GnuCash – imenenja yezemali ehlukahlukene yokulandelela ukuhamba kwakho kwezimali. Isofthiwe inkulu kubantu abazimele kanye namabhizinisi amancane ukugcina amarekhodi ezinkokhelo kanye nezindleko, izimpahla kanye nezikweletu, ukuthengiselana, amaphothifoliyo wokutshala izimali, izinkokhelo zemali mboleko, njll. Lapho udala i-akhawunti, i-GnuCash inikeza ukukhetha imali, ubhale phansi ulwazi mayelana nenkampani yakho futhi ucacise uhlobo lwe-akhawunti oluzogcina uhlelo lwama-akhawunti alandelayo. Isofthiwe iqukethe imodemu yokwakha amagrafu yedatha yezimali yomsebenzisi ngesimo samashadi ahlukene futhi isekela ama-akhawunti aphelele angasetshenziswa ukuze afane nezidingo zakho zomuntu siqu. I-GnuCash ikuvumela ukwenza umsebenzi ohlukile ngokuthengiselana, kufaka phakathi ukuthengiswa okuhleliwe okuhlelwe kumhleli okhethekile. Futhi, i-GnuCash ikwazi ukungenisa idatha kusuka kwezinye izinhlelo zezimali, njenge-QIF ne-OFX.
Ukwakha amagrafu nemibiko
Ukuhlukaniswa kwemali engenayo kanye nezindleko ngezigaba
Sebenza ngephothifoliyo yesitoko
Amazwana ku GnuCash
GnuCash software ehlobene
I-HomeBank – ithuluzi elisebenzayo lokulawula imali. Isoftware ikuvumela ukuthi ugcine umkhondo wezindleko noma imali futhi ubonise isimo sezimali ngendlela yamagrafu.
I-Bitcoin – iklayenti elidumile lokuthola imali ebonakalayo. Isoftware isebenzisa inethiwekhi ekhethekile yokudlulisa imali ephephile nokubethelwa kwedatha.
I-HOA Tracking Database – isofthiwe yokufinyelela ku-database yenhlangano yabaninikhaya. Isoftware inika amandla ukusesha imininingwane edingekayo, ukuphatha ezilinganisweni ze-akhawunti nokubuka umlando wokukhokha wemibiko.
Isofthiwe ukuze imisebenzi zezibalo yobunjiniyela kanye nasezingeni zesayensi. Isofthiwe isekela ezihlukahlukene amathuluzi for analysis, ukucabanga kanye sekulingisa idatha.
I-Crypto! – isoftware yokwakha nokuxazulula ama-cryptographs. Isoftware ifaka amathuluzi amaningi wokwenza izinhlobo ezahlukahlukene ze-cryptography.
Le software iklanyelwe ukuhlela nokuguqula amafayela wesithombe esilawulayo, alalelwayo namavidiyo futhi isekela amathuluzi athuthukile ukuwacubungula.
Le software iklanyelwe ukwenza izenzo eziyisisekelo namafayela alalelwayo amafomethi ahlukene, ungakwazi ukusika, ukutshala, ukuhlukanisa, ukuhlanganisa, nokusebenzisa imiphumela ehlukahlukene yemisindo kumafayela.